Nagarik News - बिग बोसः वास्तविक कि बनावटी ?
एउटा घरमा केही कलाकार (प्रायः सेलिब्रिटी) हप्तौँसम्म बस्छन्। बाहिरी संसारको सम्बन्ध र संगतबाट पूर्णतः विच्छेद हुन्छन् उनीहरू। उनीहरूका हरेक गतिविधि दर्जनौँ क्यामराका निगरानीमा हुन्छन्। घरभित्र उनीहरूको काम हुन्छ, गफ गर्नु, कुरा काट्नु र कसलाई घरबाट निकाल्ने हो, त्यसको तानाबाना बुन्नु। एकअर्थमा षडयन्त्र गर्नु। उनीहरूका मनोदशा, क्रियाकलाप लाखौँ दर्शकले हेर्न पाउँछन्। अन्त्यमा जो घरमा रहिरहन सक्छ, उही विजेता हुन्छ र आकर्षक नगद पुरस्कार कुम्ल्याउँछ।
भारतीय टेलिभिजन रियालिटी शो बिग बोसको सार यत्ति हो। हाल यसको आठौँ संस्करण चलिरहेको छ। 'कलर्स' च्यानलमा प्रसारण भइरहेको यो शो अत्यधिक लोकप्रिय छ। नेपालमा पनि यसका दर्शक मनग्गे छन्।
बिग बोसको भारतीय मौलिक सिर्जना भने होइन। सन् १९९७ मा निदरल्यान्ड्समा 'बिग ब्रदर' भन्ने कार्यक्रम प्रसारण भयो। 'बिग बोस' यसकै अनुकरण हो। थुप्रै देशमा यस्तो प्रारूपका कार्यक्रम भइरहेका छन्।
सन् २००७ मा बिस बोसको पहिलो संस्करण प्रसारण भएको थियो। पहिलो संस्करणदेखि नै प्रतियोगीहरूबीच घरभित्र हुने विवाद र घोचपेचका कारण शो चर्चित छ। मान्छेको मनोविज्ञान, मनोदशा, एउटा सानो र बन्द दुनियाँमा उसले गर्ने व्यवहार आदि हेर्नु रोचक हुन्छ। तर, प्रतियोगीका गतिविधि स्वतःस्फूर्त हुन् वा ती कृत्रिम र 'स्क्रिप्टेड' हुन्छन्, यो भने धेरैका निम्ति आशंकाको विषय भएको छ।
केहीका लागि बिग बोस पूर्णतः पहिल्यै पटकथा तय भएको कार्यक्रम हो। उनीहरू मान्छन्– प्रतियोगीबीच हुने झगडा, प्रेम सबै बनावटी हुन्। केबल दशर्कको लोकप्रियता (टीआरपी) बटुल्न सारा नौटंकी गरिन्छन्।
यस सम्बन्धमा प्रतियोगीहरूको भनाइ समान छैनन्। बिस बोस–८ की प्रतियोगी मिनिषा लाम्बा भन्छिन्, 'बिस बोसको घरमा सबैथोक बनावटी हुन्छ। ती प्रतियोगी असल हुन्छन्, जो धेरै दिनसम्म टिक्दैनन्। दर्शकको ध्यान खिच्न प्रतियोगीहरू अनेक नौटंकी गर्छन्।'
अर्का प्रतियोगी प्रणीत भट्ट भन्छन्, 'घरभित्र जेजति लडाइँ–झगडा हुन्छन्, मानसिक तनावका कारण हुन्छन्। बाहिर आउनेबित्तिकै पहिले लडेकाहरू केही दिनमै साथी बन्छन्।'
शोका क्रममा प्रतियोगीबीचका प्रेमप्रसंग पनि त्यति बलिया र विश्वसनीय लाग्दैनन्। बिस बोस–८ का क्रममा गौतम गुलाटी र डायन्ड्रा अत्यन्त निकट थिए। अघिल्लो संस्करणमा कुशाल टन्डन र गौहर खानले शोभित्रै प्रेम प्रकट गरेका थिए। त्यसैगरी अरमान कोहली र तनिषा मुखर्जीले पनि आफूहरू अत्यन्त निकट भएको स्विकारेका थिए तर शो सकिएको केही समयपछि नै यी दुई जोडीले आफूहरू अलग भएको घोषणा गरेका थिए।
गौतम गुलाटी र डायन्ड्राको सम्बन्ध विशेष प्रतीत हुन्थ्यो। उनीहरूले चुम्बन गरेका दृश्य पनि देखिए। र, यस्तैमा हल्ला चल्यो– डायन्ड्रा गर्भवती भइन्। डायन्ड्रा यस खबरलाई बिलकुल निराधार बताइन् र भनिन्, 'किस गरेर पनि कोही गर्भवती हुन्छ ? स्वास्थ्य बिग्रेकाले चेकअपका लागि मलाई अस्पताल लगिएको थियो। तर, म गर्भवती भएको वाहियात हल्ला फैलाइयो।'
बिस बोसमा कुटपिट र झगडा पनि भइरहन्छन्। झगडिया प्रतियोगीलाई घरबाट 'आउट' पनि गरिएका छन्। शोमा हुने गलफती र हात हालाहाललाई 'नौटंकी' मान्ने पनि छन्। तर, मारपिटकै कारण प्रतियोगी बेघर भएका छन्। पुनीत इस्सर, एजाज खानलाई यही आरोपमा घरबाट निकालिएको थियो।
भन्थे कबीर- ढाई अक्षर प्रेमको जसले पढ्यो, उही विद्वान हुन्छ। युद्ध, हिंसा, अशान्ति र बेथितिमा नराम्रोसँग जेलिएको यो संसारमा आज केहीको सबैभन्दा तीव्र आवश्यकता छ भने प्रेमकै छ। भ्यालेन्टाइन्स डेे...
अर्जुनको मीठो धुन
झापा, बाहुनडाँगीका अर्जुन कार्की पूर्वी नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भारत, भुटान र नेपालका विभिन्न ठाउँमा पुग्छन्। जहाँ पुगे पनि उनको साथ हुन्छ बाँसुरी।